कोरोना संकटमा कसरी अर्बपति बने यी व्यक्ति ?
कोरोना संकटमा कसरी अर्बपति बने यी व्यक्ति ? प्रेमिका भेट्ने सास्तीले जन्माएको थियो ‘जूम सपना’
शिलापत्र संवाददाता काठमाडाैं, २१ वैशाख
केही साता अघिसम्म उनको नाम तपाईंले सायदै सुन्नुभएको थियो । कतिपयले त अहिले पनि सुनेका छैनन् होला !
लकडाउनको माझमा ती व्यक्ति चामत्कारिक ढंगबाट उदाएका छन्, यसले वास्तवमै धेरैलाई अचम्मित तुल्याएको छ ।
भिडियो कन्फ्रेन्सिङ कम्पनी ‘जूम’का फाउण्डर एरिक युआन जिन्दगीमा पहिलो पटक ‘फोर्ब्स’ म्यागजिनको अर्बपतिहरूको सूचिभित्र परेका छन् । फोर्ब्स म्यागजिनले एरिक युआनसँग ९ दशमलव ८ अर्ब डलर सम्पत्ति रहेकाे अनुमान गरेको छ । माइनिङ इन्जिनियरका छोरा एरिकको जन्म चीनको शानडोङ प्रान्तमा भएको थियो ।
चीनमा इन्जिनियरिङ अध्ययन, फेरि जापानमा चार वर्षको जागिर र त्यहाँबाट बाँकी पढाइका लागि अमेरिका पुगेका थिए एरिक ।
एरिकको जिन्दगीमा अझै गन्तव्यहरू बाँकी नै थिए । तर, उनका लागि यात्रा त्यति सजिलो थिएन ।
उनी बिल गेट्ससँग प्रभावित थिए, संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बन्न चाहन्थे । नब्बेको दशकमा क्यालिफोर्नियामा फलफूलवाला टेक्नोलोजी कम्पनीको लहरमा उनी सामेल हुन चाहन्थे ।
अमेरिकामा बस्न र काम गर्न आवेदन दिँदा ८ पटक उनको भिसा एप्लीकेसन ‘रिजेक्ट’ भइसकेको थियो ।
यद्यपि, तमाम चुनौतीका बाबजुद सन् १९९७ मा एरिक २७ सालको उमेरमा एक नयाँ जिन्दगी सुरू गर्न सिलिकन भ्याले पुगे ।
भिडियो कन्फ्रेन्सिङ एप
उनको अंग्रेजी अलि कमजोर थियो । तर, आफ्नो सीप तिखार्नका लागि उपयुक्त ठाउँ खोज्नमा उनले धेरै समय लगाएनन् ।
टेक्नोलोजी फर्म ‘वेबएक्स’मा कार्यक्रमकर्ताका रूपमा उनको यात्रा सुरू भयो । करिब १० वर्षपछि ‘वेबएक्स’ले एउटा ठूलो कम्पनी ‘सिस्को सिस्टम्स’ किन्यो । उक्त कम्पनीमा एरिक इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख बने । सन् २०११ मा उनले सिस्कोका अधिकारीहरूलाई उनले यस्तो भिडियो कन्फ्रेन्सिङ एपको विकास गर्ने आइडिया दिए, जुन एपलाई डेस्कटप र ट्याबलेटमा मात्र होइन, मोबाइल फोनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सिस्कोमा यो आइडिया अस्वीकार गरियो । तर, एरिक रोकिएनन् । उनले आफ्नो विजनेस जूम सुरू गर्नका लागि राजीनामा दिए ।
यो आइडिया कसरी आयो ?
अनलाइन पब्लिसिङ प्लेटफर्म ‘मिडियम’लाई दिइएको एक अन्तर्वार्तामा एरिकले भने, जब मैले पहिलो पटक जूमको कल्पना गरेको थिएँ, त्यो बेलामा म चीनमा एक युनिभर्सिटीको विद्यार्थी थिएँ । आफ्नी गर्लफ्रेन्डसँग भेटन अक्सर मैले दस घण्टा ट्रेनमा यात्रा गर्नुपर्थ्यो । उनी अहिले मेरी पत्नी हुन् ।’
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘मलाई त्यसरी यात्रा गर्न मन लाग्दैन थियो । म सोच्थेँ–विना यात्रा आफ्नी गर्लफ्रेण्डसँग कुरी भेटौँ । यो त्यही सपना थियो जसले जूम जन्मायो ।
तर, आफ्नो प्रोजेक्टका लागि पैसा जुटाउनका लागि कम चुनौती थिएन । सिस्को छोडेपछि लगानीकर्ता खोज्नु, आफ्नो प्रोजेक्टप्रति भरोसा दिलाउनु निकै कठिन कुरा थियो ।
लगानीकर्ताहरूले उनलाई यो खालको विजनेसको भविष्य छैन, अरु कुनै नयाँ खेलाडीका लागि ठाउँ नै छैन भन्थे ।
फाइनान्सियल टाइम्स अखबारका अनुसार एरिक युआनले यसका लागि आफ्ना साथी र परिवारसँग ऋण लिए । स्मार्टफोन र क्लाउड स्टोरेज कम्पनीहरूको विस्तारले जूमजस्तो प्रोडक्टका लागि अनुकूल परिस्थिति पैदा गरिदिएको थियो ।
फोर्ब्स म्यागजीनसँग एरिकले भने, ‘यहाँसम्म कि मेरी श्रीमती पनि आश्वस्त थिइनन् । मैले उनलाई सम्झाएँ । यो एउटा लामो र कठिन यात्रा हो । मलाई यो कुरा थाहा छ । तर, प्रयास गरिनँ भने पलाई यसप्रति पछुतो हुने छ ।’
यसरी प्रेमिकासँग भेट्न झेल्नु परेको सास्तीले जूमजस्तो प्लेटफर्म तयार गर्ने बाटो बनायो जसले आज लामो दूरीको विजनेस मिटिङ मोबाइल वा कम्युटर स्क्रीनमै सम्भव बनाउँछ ।
महामारीको बीचमा कारोबारमा उछाल
गत वर्ष अप्रिलमा नेस्डेकमा सूचीबद्ध हुनु अघिसम्म जूमको कारोबार बढिरहेको थियो । नेस्डेकमा जूमको लिस्टिङ पनि कामयाब नै थियो । क्लाउड सफ्टवेयर क्याटोगेरीमा जूम सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्ने कम्पनीमध्ये एक थियो । सेप्टेम्बरमा यो क्षेत्र संघर्ष गरिएको बेला पनि जूमका लागि स्थिति राम्रै थियो । डिसेम्बरसम्म सबै सामान्यरूपमा चलिरहेको थियो, त्यही बेला अचानक परिस्थिति बदलियो । संसारमा कोरोना भाइरसको महामारी आइलाग्यो ।
संसारभरको वित्तीय बजार डुब्दै गर्दा जुमको सेयर १४ प्रतिशतको दरले बढिरहेको थियो । डिसेम्बरसम्म जूम्मा दैनिक एक करोड प्रयोगकर्ता आउँथे, मार्चसम्म यो संख्या बढेर २० करोड पुगेको छ ।
कम्पनीको आफ्नो आँकडाअनुसार अप्रिलमा अहिलेसम्म यो संख्या बढेर ३० करोड भएको छ । बजारको अनुमान छ कि बितेका तीन महिनामा एरिक युआनको सम्पत्ति चार अर्ब डलर बढेको छ । किनकि, संसारका अधिकांश देशमा लकडाउन लागू गरिएको छ र मानिसहरू एकअर्कासँग् कुराकानीका लागि उपयुक्त प्लेटफर्मको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
लकडाउनको बीच विजनेस मिटिङ वा कुनै अर्को उद्देश्यले कुराकानी गर्न माइक्रोसफ्ट स्काइप र गूगल ह्याङआउनजस्ता खेलाडी बजारमा पहिल्यैदेखि थिए । यी सबै हुँदाहुँदै जूमले निकै राम्रो प्रदर्शन ग¥यो । एरिक युआनले आखिर कसरी यसलाई सम्भव बनाए त ?
प्रविधि क्षेत्रका जानकार भन्छन्, जूमको सफलता पछाडि सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको यो प्रयोग गर्न सजिलो छ । यसमा प्रयोगकर्ताले दर्ता हुनुपर्दैन । एउटा कल कन्फ्रेन्सिङमा ४० मिनेटसम्म १०० मानिस जोडिन सक्नछन् जुन निःशुल्क हो ।
तर, यो एक दोधारे तलवारजस्तै भएको छ । यसलाई प्रयोग गर्न जति सजिलो छ, डाटा र गोप्यतामाथि उत्तिनै खतरापूर्ण पनि छ ।
सुरूमा जूमको कल्पना एक विजनेस मिटिङ टूलका रूपमा गरिएको थियो । अहिले सबै तप्काका मानिस यसको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
कम्पनीमा ह्याकिङ आक्रमण बढेको छ । यस्तोमा जूमको प्रयोग जोखिमपूर्ण हुन सक्ने पनि बताइन्छ ।
एउटै यस्तै रिपोर्ट बाहिर आएको छ कि भिडियो कन्फ्रेन्सिङका क्रममा ह्याकरको घुसपैठ भयो र आपत्तीजनक पोर्नोग्राफीवाला कन्टेन्ट पब्लिस गरियो । हिजोआज यो चलनलाई जूम्बम्बिङको नाम दिइएको छ ।
मिटिङलाई रेकर्ड गर्न पनि सुरक्षित छैन किनकि, अरु विनाअनुमति यहाँसम्म आइपुग्न सक्छन् ।
न्यूयोर्कका एटर्नी जनरल लेटिटिया जेम्सले जूमसँग सोध कि के कम्पनीले अतिरिक्त सुरक्षा मापदण्ड लागू गरेको छ ? सांसद, मन्त्री, कम्पनीहरूका निर्देशक र जूमका अन्य ग्राहक अहिले यस्तै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
म निकै लज्जित छु
एरिक युआनका अनुसार जूमलाई सर्भिस कम्पनीहरूको आवश्यकताको हिसाबले डिजाइन गरिएको थियो । यत्रो ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ता आउलान् भन्ने नलागेर हुनुपर्छ, त्यस्तो तयारी गरिएको थिएन । गोप्यता र सुरक्षाको सवालमा खरो नउत्रिएको कुरा उनले स्वीकार गरेका छन् ।
यी समस्या समाधानका लागि कुनै कदम उठाउने घोषणा गर्दै एरिकले भनेका छन्, ‘म निकै लज्जित छु ।’
बेलायती साइबर सेक्युरिटी कन्सल्टेन्ट ग्राहम क्लुले भन्छन्, ‘हालैका सातामा कम्पनीको निकै छानविन भयो । सोधकर्ताले कोड्स जाँच गरे । यसमा गम्भीर कमजोरी पाइएको छ । यद्यपि, कम्पनीले सफ्टवेयर अपडेट्स जारी गरेको छ र सुरक्षाका अर्को उपाय अवलम्बन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।’
उनका अनुसार ठूलो राजनेताले संवेदनशील विषयमा कुराकानी गर्न जूम विश्वासयोग्य माध्यम होइन । ‘तर, धेरैजसो आम मानिसका लागि यो त्यस्तो खराब होइन’, उनले भने ।
गत सातायता अन्य कम्पनीहरूले पनि आफ्नो रणनीति बदलेका छन् । केही दिन पहिले फेसबुकले म्यासेन्जर रूमको फिचर लञ्च गरेको छ जसमा ५० जना अनलिमिटेड टाइम भर्चुवल मिटिङ गर्न सक्छन् । (बीबीसीबाट)
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २१, २०७७, ०९:०७:००
#जूमका मालिक एरिक